Vaovao - Fanodinana fitaovana fitsaboana
Esory ny tsimparifary, fasika ary faritra tsy fanafody. Araka ny fitakian'ny karazana karazany dia mila manaisotra ny hoditra ny sasany, toy ny fotony fotsy fotsy; ny sasany mila manapaka ny hodi-kazo maranitra, toy ny bosoa; ny sasany dia mila manala ny loha bararata, faka faka fibrous ary sampana sisa sy ravina sns, ary avy eo manao fanasokajiana habe, toy ny achyranthes, hazo maitso Incense, Salvia, Angelica dahurica, Peucedanum, Shegan, Polygonum cuspidatum, etc. ny sasany tsy maintsy manala ny fon'ny hazo, toa an'i Danpi.
Tsy mora maina ny manafosafo, mangotraka ary manafosafo fanafody vitsivitsy izay misy tsiranoka na gliosida ary mucilage kokoa. Ny sasany koa dia misy anzima mamaivay sy manova ny sasany amin'ireo singa ao aminy. Raha mafana izy ireo, dia tsy hahavelom-bolo ny anzima. Tazomy tsy ho simba ny fananan'ny fanafody.
Ny fitaovana fitsaboana rhizome sasany, toy ny Danshen, Angelica dahurica, Peucedanum, Achyranthes, Shegan, Polygonum cuspidatum, Phytolacca, Pueraria lobata, Tufuling, Scrophulariaceae, sns., Dia tokony hokapaina ho sombin-javatra, na sombin-javatra rehefa madio, ary avy eo maina. ; Ireo fitaovana fitsaboana voankazo izay tsy mora maina, toy ny papay xuan, sokay, bergamot, sns, dia tokony hokapaina alohan'ny ahamaina azy; ny akora fanafody hodi-kazo toy ny kininina, magnolia, kanelina, sns. Atsofohy ao anaty fantsona iray ary avy eo maina.
Ny tanjon'ny fanamainana dia ny hanamorana ny fitehirizana sy ny fampiasana maharitra, ary hiezahana hitazona ny endrika, fofona ary ny atin'ny akora mavitrika miasa tsy miova mandritra ny fanamainana.
Mampiasà tara-masoandro sy rivotra ivelany mba hampamaina ireo ahitra. Ny fomba fanamainana ny masoandro amin'ny ankapobeny dia mety amin'ny fitaovana fitsaboana izay tsy mitaky loko iray ary tsy misy menaka miovaova, toy ny coix, burdock, astragalus, paeonol, eucommia, sns. Ny fomba fanamainana ny masoandro dia tsotra, fa ny fanafody samihafa samy hafa ny fomba fampitaovana. Rehefa maina dia mazàna aparitaka eo ambony tsihy ny fitaovana fitsaboana voajinja. Tandremo mba hisorohana ny orana, ny ando, ary hisorohana ny rivotra tsy hiparitaka, ary matetika avadiho izany mba hampiroboroboana ny fanamainana aloha.
Amboary amin'ny hafanana ambany ny fitaovam-panafody amin'ny alàlan'ny fanamainana na lavaka afo hanamainana ireo fanafody. Ny hafanana dia tokony hofehezina mandritra ny fanamainana. Raha ambany ny maripana dia tsy mora ny maina. Raha avo loatra ny mari-pana dia hisy fiatraikany ny kalitao. Raha tsy mihoatra ny 60 ℃ ny maripanan'ny rhubarb natsatsika dia ho maizina ny vatan'ny vatana ary hihena ny kalitaony. Avo loatra, toy ny maripanan'ny voninkazo volafotsy maina, dia fehezina amin'ny 38 ℃ -42 ℃.